Lennox Lewis vs Vitali Klitschko | Imfazwe yeTitans | IBoxen247.com
I-WBC, i-IBO, iRing kunye neLineal Championship
U-Lennox Lewis vs Vitali Klitschko: Umlo wenzeka ngoJuni 21, 2003 e Isiko seStaples in los Angeles, California. U-Lewis woyisa uKlitschko ngomjikelo wesithandathu Ukunkqonkqoza kwezobugcisa (TKO) emva kokuba umlo umisiwe ngenxa yokunqunyulwa okunzima ngaphezulu kwamehlo asekhohlo kaKlitschko. Yayingumlo wokugqibela wobomi bukaLewis, emva kokuthatha isigqibo sokuthatha umhlala-phantsi emva kokuba ekugqibeleni enqabile impinda.
Kunyaka ophelileyo, uLennox Lewis ekugqibeleni wadibana noMike Tyson kwisangqa kwaye wazuza uloyiso olubalaseleyo ngokunkqonkqoza uTyson kumjikelo wesibhozo wokulwa irekhodi kwabo bePVV. Emva kokuphumelela kwakhe, uLewis uzakuthatha ikhefu lonyaka wonke kwiringi, ekugqibeleni ashiye isihloko sakhe se-IBF emva kokudlula kwithuba lokujongana nomdlali ophambili we-IBF uChris Byrd. Endaweni yoko, uLewis wajika wajonga umdlalo onokubakho noVitali Klitschko, owayengumbhexeshi wenombolo ye-WBC emva kokoyisa uLarry Donald ngomjikelo weshumi. Ekuqaleni kuka-2003, nangona kunjalo, iingxoxo zokulwa zawa kwaye uLee Lewis waqala ukujonga ukuphindaphinda okunomvuzo kunye noTyson. I-WBC igwebe ukuba umdlalo ophindwayo kunye noTyson uya kuvunyelwa kwisiseko sokuba ophumeleleyo uza kukhusela isihloko sakhe ngokuchasene neKlitschko. UTyson udlulile kumdlalo ophindaphindiweyo, enyanzela uLewis ukuba amkele umlo othengisayo kancinci ngokuchasene noKirk Johnson apho bekuya kuba kuphela isihloko sikaLewis 'IBO. U-Klitschko wayezokulwa kwi-undercard kwaye athabathe u-Lewis ngo-Disemba. Ngaphambi kokuba umlo kaLewis-Johnson uqhubeke, uJohnson wanyanzelwa ukuba aphume enzakele esifubeni. Kananjalo, uLewis noKlitschko bavumile ukuba bajongane ngoJuni 21, kunokuba kamva kunyaka njengoko bebecwangcisile.
Nangona uKlitschko weza kulwa njenge-underdog, wakwazi ukuqala kakuhle kumlo. UKlitschko wayengumhlaseli kumjikelo wokuqala wokuqala kwaye wafaka isibhamu esinzima entlokweni kaLewis, ephumelela yomibini imijikelo kuwo omathathu amakhadi amajaji. Kumjikelo wesibini, uKlitschko ukwazile ukugungxula uLewis ngezandla zakhe zombini ezinzima ezivula ukusikwa phantsi kwamehlo kaLewis ekhohlo. Kumjikelo wesithathu, uLewis uphume ngobundlongondlongo kwaye wafaka isandla esomeleleyo ngaphakathi kwimizuzwana yokuqala eyi-10 evule ukusika okungaphezulu kweliso lasekhohlo likaKlitschko. Ngaphandle kokonzakala kwakhe, uKlitschko walwa umjikelo osondeleyo noLewis njengoko abo babini babethengisa i-jabs kunye neepunch zamandla kuwo wonke umjikelo nangona uLewis wakwazi ukuphumelela umjikelo kumanqaku amanqaku. U-Klitschko wabuya wathabatha umjikelo wesine apho omabini amajoni abonakala ediniwe. Kumjikelo wesihlanu, uLewis wabetha amanqindi amaninzi alandelelanayo kwiimbambo zikaKlitschko ngesandla sakhe sasekunene ngelixa eklinikhi kunye noKlitschko, kunye nabahlalutyi be-HBO bengavumelani nokuba semthethweni kweepunch. Ngexesha lokugqibela ezintlanu laligqityiwe, imeko yeliso likaKlitschko yayikhule mbi, ngekhamera yekona isasaza inxeba elibi elivulekileyo, kodwa ke wayevunyelwe ukuba aqhubeke kumjikelo wesithandathu. U-Lewis wasebenzisa ithuba lokungaboni kakuhle kukaKlitschko kumhlaba omkhulu we-uppercut kumjikelo wesithandathu. Okwangoku omabini amajoni abonakala ediniwe, ehlala emangalisa emva kokudibana. Phakathi kwemijikelo yesithandathu ukuya kweyesixhenxe, kwagqitywa ngugqirha wesangqa ukuba umonakalo kwiliso likaKlitschko wawumkhulu kakhulu kwaye umlo wamiswa. Ngenxa yokuba ukwenzakala kukaKlitschko kwakubangelwe kukudliwa ngamanqindi nguLewis, uLewis wachongwa njengophumeleleyo kumlo ngokunkqonkqoza kwezobuchwepheshe.  UKlitschko wayengaphambili kuma-58-56 kumanqaku amakhadi kunye neejaji ezimbini zinika uLewis imijikelo yesithathu neyesithandathu kuphela enye imijikelo emihlanu neyesithandathu. Isihlwele siqhubeke no-boo Lewis, kwaye savuya uKlitschko, ngokunokwenzeka engonwabanga ngokumiswa.
Ngenxa yokuphela kwengxabano, kwakukho imfuno eninzi yokubuyisela phakathi kwezi zibini. U-Lewis ekuqaleni walwamkela olu luvo, esithi emva kokuphumelela kwakhe wayenethemba lokuphinda ajongane noKlitschko kwakhona ngo-Novemba okanye ngo-Disemba 2003. Ukonzakala kwamehlo kukaKlitschko kwakupholile kangangokuba wayecociwe ukuba ajongane noLewis kwaye umhla omiselweyo woku-6 kuDisemba wamiselwa. Umdlalo kwakhona. Nge-Agasti, nangona kunjalo, u-Lewis watshintsha ingqondo yakhe wakhupha ngaphandle, echaza iinjongo zakhe zokungalwi kwaphela intsalela ka-2003. Endaweni yoko, u-Klitschko wanyanzelwa ukuba abe ngumsusi we-WBC kunye no-Kirk Johnson ngo-Disemba 6, 2003 ukumisela Ngubani oza kujongana noLewis ngokulandelayo. UKlitschko uthumele ngokulula uJohnson, ephumelela ngomjikelo wesibini wokunkqonkqoza kwezobuchwephesha, ukuseta umdlalo kwakhona noLewis. Nangona kunjalo, uLewis wabhengeza umhlala phantsi emva kweenyanga ezimbini ngoFebruwari 7, 2004, eshiya izihloko zakhe kwinkqubo. Kwiinyanga ezimbini kamva, uKlitschko wadibana nenani le-WBC elalisakuba likhuphisana kunye no-Corrie Sanders owayengumphathi we-WBO, owoyisa umntakwabo Klitschko uWladimir ngaphambili ngo-2003, kwi-WBC engenamntu kunye ne-The Ring heavyweight titles. UKlitschko woyise uSanders, oshiye isihloko sakhe se-WBO ukuze alwe noKlitschko, ngomjikelo wesibhozo wokunkqonkqoza kwezobuchwephesha ukuze abambe isithsaba.